Bixby Voice ကို Galaxy S8 ကိုစတင်ရန်အချိန်မီရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ Androidsis
Galaxy S8 ၏အရေးအကြီးဆုံးအင်္ဂါရပ်များအနက်တစ်ခုသည်၎င်း၏ဖြန့်ချိသောအခါတွင်မရနိုင်ပါ
Samsung Galaxy S8 မှာအများကြီးရှိတယ် အထင်ကြီးစွမ်းဆောင်ရည်သူတို့ရဲ့အဖြစ် ကွေးကောက်မျက်နှာပြင် "Infinity"ပရိုဆက်ဆာ၊ Snapdragon 835, မျက်နှာပြင်ပေါ် Configure လုပ်ထားတဲ့ခလုတ်, ဒါမှမဟုတ် iris စကင်နာ ရှေ့ကင်မရာတွင်ပါ ၀ င်သော်လည်းအချို့အင်္ဂါရပ်ကိုကုမ္ပဏီမှရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်။
အထူးသ, el ကို virtual လက်ထောက် bixbyအသစ်သောစွမ်းဆောင်ရည်သစ်၏အကြီးမားဆုံးအသစ်အဆန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့်၎င်းသည်ရောက်ရှိလိမ့်မည် အသံထိန်းချုပ်မှုအတွက်ပံ့ပိုးမှုမရှိပါကလုပ်ဆောင်ချက်များ၏ကျန်ရပါလိမ့်မယ်ပေမယ့်။
Samsung မှထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရ ဆော့ (ဖ်) ဝဲအတွက်အသံရှာဖွေနိုင်မှုသည် "နှောင်းပိုင်းနှောင်းပိုင်း" သို့ရောက်လာသည်။.
Bixby သည်၎င်း၏ smart interface နှင့်ဆက်စပ်နေသောအသိအမြင်ရှိခြင်းဖြင့်မတူညီသောလုပ်ငန်းများကိုပြီးမြောက်အောင်ကူညီခြင်း၊ သင်မြင်တွေ့နေရသောအရာများကိုပြောပြခြင်း၊ သင်၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကိုလေ့လာခြင်းနှင့်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမှတ်မိခြင်းဖြင့်သင်၏ဖုန်းကိုပိုမိုအသုံးဝင်စေလိမ့်မည်။ isionပြီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ Samsung Galaxy S8 ကို Vision, Home သို့မဟုတ် Reminder စသည့်အရေးကြီးဆုံး Bixby feature များဖြင့်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် Bixby Voice ကိုယခုနွေ ဦး ရာသီ၌အမေရိကန်၌ Galaxy S21 အတွက်ရရှိနိုင်လိမ့်မည် "
ကြော်ငြာကိုရှင်းလင်းရန် Vision သည်တိုးချဲ့ထားသောအဖြစ်မှန်တစ်ခုဖြစ်သည် ကင်မရာအဘို့, နေစဉ် မူလစာမျက်နှာသည် Google Now feed ၏ကိုယ်ပွားဖြစ်သည် နှင့်သတိပေးမှုသည်သတိပေးချက်များကိုထည့်သွင်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
S8 သည် Bixby ကိုအဓိကအာရုံစိုက်သည့်အနေဖြင့်ထုတ်ကုန်ပင်ဖြစ်သည် သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုအတွက်ဆက်ကပ်အပ်နှံခလုတ်ကို, အသံထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်း Samsung ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပတ်သက်။ သံသယအချို့။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်အမေရိကန်နှင့်တောင်ကိုရီးယားတို့အတွက်သာဖြစ်သည်။ ကျန်နိုင်ငံများက Bixby ကိုထောက်ခံမှုများစွာရရှိလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းနောင်လာမယ့်အနာဂတ်မှာ Galaxy S8 ကို ၀ ယ်တော့မယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိူင်ရန်သင်လုပ်နိုင်သည်မှာ Bixby ခလုတ်ကိုပြန်လည်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Galaxy S8 ၏အရေးအကြီးဆုံးအင်္ဂါရပ်များအနက်တစ်ခုသည်၎င်း၏ဖြန့်ချိသောအခါတွင်မရနိုင်ပါ
Ooops! ဒီဟာပြီးပြီ သတိပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် :) ။
ရှိပြီးသားရာထူး, ပို။ ပို။ «ပရော်ဖက်ရှင်နယ်»«ကျွမ်းကျင်မှု»ထက်ပိုကောင်းတဲ့«ကျွမ်းကျင်မှု», »အခြားအရာတစ်ခု
Fitbit သည်၎င်း၏စမတ်နာရီအသစ်ကိုအနည်းဆုံး ၂၀၁၇ မကုန်မီရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည်
Android Wear 2.0 ဖြင့် ZTE Quartz သည်စျေးအသက်သာဆုံးစမတ်နာရီဖြစ်နိုင်သည်